New Type Kwụ Ọtọ Line Beveling Edge Glass Edging polishing Machine na asatọ na-egweri isi
Ozi Ngwaahịa & Akwụkwọ Mpempe akwụkwọ EXW ọnụahịa 65000 RMB 2020bọchị 2020/12/9 Valid Nkwupụta ahụ ga-adị irè maka ụbọchị 30. Mentkwụ ụgwọ T / T. Nkwakọ ngwaahịa & nzipu Standard osisi ikpe; Daysbọchị 30 (1200RMB) Ihe nkebi 1: Newdị ụdị ọhụụ ọhụụ nke na-eme ka iko na-egbuke egbuke ya na isi ya na-egweri isi 9001-8 Dimension 3700 * 1300 * 1700mm Weight 1400kg Max nhazi size 200cm * 200cm Min nhazi size 4cm * 4cm Glass nhazi ọkpụrụkpụ 3mm-12 m ...
The High kpọmkwem iko abụọ edger igwe adabara-egweri ewepụghị iko na abụọ ogologo n'akụkụ.
Nsogbu na-egweri, na-egweri ihe, na-eme ka ikuku nchekwa (arụnyere nchebe na-enweghị nchebe) ozugbo agwụchara.
Egweri isi eji na abụọ ogologo Rolling ndu, abụọ bọl ịghasa mbanye iru a anụ na-akpụ akpụ ọsọ, iwepụ mobile nwechapụ, belata ndị na-eguzogide na esemokwu, iji hụ megharịa n'ọnọdu.
Nkọwapụta Nnyocha zuru ezu na mmepe, imewe, mmepụta, enwere ike ịhazi ya dịka mkpa pụrụ iche nke ndị ọrụ. Nke a mepụtara 6mm nke ukwuu 6061 dị elu nke ukwuu ụlọ ọrụ aluminium iji wepu nrụgide dị n'ime, iji hụ na ndụ ọrụ na ikike nke ibu nke aluminom, nnukwu igwe nhazi igwe, iji hụ na perpendicularity na straightness nke echichi elu, melite ziri ezi Mụta ike dị elu nke mba ...
Laser akpaka n'ọnọdu, graphic scanning, akpaka labeling, ogologo akara & pụrụ iche ekara ọnwụ, elu ọnwụ nkenke, ngwa ngwa ọnwụ ọsọ, ogologo ọrụ ndụ, ọ dịghị consumables